Manchester United oo ku dhow in ay gacanta ku dhigto bedelka Ander Herrera - Jazeera FM
Manchester United oo ku dhow in ay gacanta ku dhigto bedelka Ander Herrera
February 10, 2018 admin featured
Kooxda Kubada Cagta ee Manchester United ayaa dib u milicsan doonta xiisaheeda ku aadan Cayaariyahan Fabinho, kaas oo qayb ka ah Kooxda AS Monaco.
Hogaamiyaha Kooxda United Mourinho ayaa damacsan in uu mar kale la midoobo kalyantigiisii hore ee Fabinho, kaas oo la wada ogson yahay in ay kasoo wada shaqeeyeen Kooxda boqorada Cad_cadka ee Real Madrid.
Manchester United ayaa lumin doonta Cayaariyahankeeda Khadkla dhexe ee Ander Herrera, kaasoo lago dhan £32-million oo gini ugu wareegi doona Kooxda reer Talyaani ee AC Milan, ka hor bilowga ololaha danbe.
Kooxda boqorada dalka Faransiiska ee Monaco ayaa bilowgii xagaagan iska diiday aduun dhan £45m, si ay u hilmaamto adeega Cayaariyahanka reer Brazil ee Fabinho, kaas oo sidoo kale bartilmaameed u ahaa qaar ka mid ah Kooxaha kale ee qaarada Yurub.
The post Manchester United oo ku dhow in ay gacanta ku dhigto bedelka Ander Herrera appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← SafafkaKooxaha Tottenham vs Arsenal Mkhitaryan iyo Aubameyang oo kusoo bilowday
Lionel Messi: “Manchester City Ama PSG Midkood ayaa ku Guuleysan Kara Champion League Xili Real Madrid Oo Ka Hadlay” →